ရှည်လျားပြီး တောက်ပသော ဆံပင်ထုကြီးကို အိပ်မက်မက်နေပါသလား? စိတ်မပူပါနဲ့။ သင့်အတွက် ဆံပင်ရှည်အောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတစ်ချို့ရှိပါတယ်။
ကန်စွန်းဥတွေမှာ ဗီတာမင် အေနှင့် ဘီတာကာရိုတင်းတို့ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာသော ဆံပင်ရှည်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရစေရုံသာမကဘဲ ကျန်းမာသော ဦးရေပြားအတွက်လည်း အဆင်ပြေကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကန်စွန်းဥဟာ ဆံပင်နဲ့ဆိုင်သော ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် သင့်အစားအသောက်တွေထဲမှာ ကန်စွန်းဥကို ပုံမှန်ထည့်စားပေးပါ။
ဗာဒံစေ့တွေဟာ ဘိုင်အိုတင်းပါဝင်မှုမြင့်မားကြောင်း သင်သိပါသလား? ဆံပင်ထုထည်များပြားလာဖို့နှင့် ဆံပင်ရဲ့ အာဟာရအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဗာဒံသီးတွေဟာ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
နေကြာစေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် အီးက သင့်ရဲ့ ဆံပင်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နေကြာစေ့စားသုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ရှည်လျားပျော့ပျောင်းတဲ့ ဆံပင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ နေကြာစေ့အစား နေကြာဆီကိုလည်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥအနှစ်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်ကောင်းမွန်ရုံတင်မကဘဲ ဘိုင်အိုတင်းလည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဥတွေမှာ Omega3fatty acid ပါဝင်မှုကြောင့် ဆံပင်ကြီးထွားမှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ကြက်ဥအနှစ်က သင့်ဆံပင်တွေကို လှပစေပြီး ဦးရေပြားအတွင်းပိုင်းသွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အစားအသောက်စာရင်းထဲမှာ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် ပဲအမျိုးမျိုးပါဝင်အောင် စားသုံးပါ။ ပဲတွေမှာ သံဓာတ်၊ ဘိုင်အိုတင်းနှင့် zinc ဓာတ်များ ကြွယ်ဝပါတယ်။ သံဓာတ်နှင့် ဘိုင်အိုတင်းဓာတ်တွေက ဦးရေပြားအာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ Zinc ဟာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြေသောက်ပဲနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးဟာ သင့်ဆံပင်အတွက်သာမကဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်တာကြောင့် စားသုံးပေးသင့်တဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
Ref-mag for women